ESI WEGHACHITE TAABỤ NA GOOGLE CHROME - GOOGLE CHROME - 2019
Isi Google Chrome
Esi weghachite taabụ mechiri emechi na Google Chrome
N'ime usoro ọrụ Google Chrome, ndị ọrụ na-emepe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke taabụ, na-agbanwe n'etiti ha, na-ekepụta ndị ọhụrụ ma na-emechi ndị ọhụrụ. Ya mere, ọ bụ ihe a na-ahụkarị mgbe otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ na-agwụ ike taabụ e mechiri na nzuzo. Taa, anyị na-ele anya otú e nwere ụzọ isi weghachite taabụ mechiri emechi na Chrome.
Ihe nchọgharị Google Chrome bụ ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu bụ nke a na-echepụta ihe ọ bụla n'ime obere nko. Iji taabụ na ihe nchọgharị ahụ dị nnọọ mfe, ma ọ bụrụ na ha mechibidoro mberede, e nwere ọtụtụ ụzọ isi weghachite ha.
Kedu esi mepee taabụ ekpuchi na Google Chrome?
Nzọụkwụ 1: Iji nchịkọta hotkey
Ụzọ kachasị mfe na ụzọ kachasị ọnụ ọnụ na-enye gị ohere imepe mepee mechiri emechi na Chrome. Otu ntinye nke nchikota a ga-emepe taabụ kpatre ikpeazụ, igodo nke abụọ ga-emeghe bọtịnụ, wdg.
Iji jiri usoro a, ọ bụ ezuru iji pịa otu igodo ahụ n'otu oge Ctrl + Shift + T.
Biko mara na usoro a bụ zuru ụwa ọnụ, ọ dịkwa mma ọ bụghị naanị maka Google Chrome, kamakwa maka ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 2: jiri ndokwa menu
Usoro nke na-arụ ọrụ dị ka nke mbụ, ma n'oge a, ọ gaghị agụnye mkpokọta igodo dị ọkụ, ma menu nke nchọgharị n'onwe ya.
Iji mee nke a, pịa aka nri na mpaghara na-adịghị ọcha nke oghere ntanetị nke ebeabụ dị, na na menu ndị dị na-egosi, pịa "Oghere mechiri emechi".
Họrọ ihe a ruo mgbe e meghachitere taabụ a chọrọ.
Usoro nke 3: Iji akwukwo nleta abia
Ọ bụrụ na emechire taabụ dị mkpa maka ogologo oge, mgbe ahụ, o yikarịrị ka ụzọ abụọ gara aga agaghị enyere gị aka weghachite taabụ mechiri emechi. Na nke a, ọ ga-adị mfe iji akụkọ ihe nchọgharị nke ihe nchọgharị ahụ.
Ị nwere ike mepee akụkọ ihe mere eme dịka iji nchikota igodo dị ọkụ (Ctrl + H), na site na ihe nchọgharị. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ bọtịnụ Google Chrome n'akụkụ aka nri ma na ndepụta na-egosi, gaa "Akụkọ ihe mere eme" - "Akụkọ ihe mere eme".
A ga-emeghe nleta nleta maka ngwaọrụ niile jiri Google Chrome na akaụntụ gị, site na nke ị nwere ike ịchọta peeji nke ịchọrọ ma mepee ya na otu igodo nke bọtịnụ òké aka ekpe.
Ụzọ ndị a dị mfe ga-eme ka ị nwee ike weghachite taabụ na-emechi n'oge ọ bụla, n'enweghi ihe ọmụma dị mkpa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Google Chrome 2019